Tartan orad ah oo lagu xusayay sanad guuraddii 1aad ee ka Soo Wareegtay Geeridii raysel-wasaarihii aragtida dheeraa ee Males-Zenawi oo maanta ka Dhacday Magaalada Jigjiga. - Cakaara News
Tartan orad ah oo lagu xusayay sanad guuraddii 1aad ee ka Soo Wareegtay Geeridii raysel-wasaarihii aragtida dheeraa ee Males-Zenawi oo maanta ka Dhacday Magaalada Jigjiga.
Jigjiga(CakaaraNews) Talaado august 20,2013.Waxaa manta oo ku beegnayd Munaasabada Heer Qaran ee sanadjirsatay kana soo wareegtay Geeridii Horseedihii Aragtida Dheeraa ee Dhidibada u taagay Isbedel Horumar,dimoqraadiyadeed iyo kobac dhaqaale oo xawaare ku hiigsaday dalalkii dhaqaalahoode dhexdhexaadka yahay Ato Meles Zenawi taasoo Guud ahaan 9ka Deegaan iyo Caasimada DFI si siman manta uga wada dhacday Dalka kana soo qaybgaleen Madaxweynayaasha Geeska Africa,Qmidoobay,Diplomasiiyiin iyo safaaradaha iyo Madax kale.
Hadaba Magaalada jigjiga ayaa ay Maanta ka dhacday ka dib Shiditaankii shamaca Xalay orod lagu xusayay Xusuusta iyo Balanqaadka ka midhodhalinta Hindisayaashii Horumarineed iyo Qorshayaashii Aragtida dheeraa ee uu Dalka u jeexay Injineerkii Horumarka iyo Isbedelka Kobaca Dhaqqaale Ato Meles senawi.
Tartankan Orodka saaka ka dhacay magaalada jigjiga ayaa ay u soo safteen Dad isugu jiray masuuliyiinta xukuumada,shaqaalaha Dawlada,ganacsatada iyo dhamaan qayblaha kala duwan ee bulshashada islamarkaana saaka subixii ka bilaabmay magaalada jigjiga.
ujeedada tartankan oo ahayd in lagu xuso halyaygii hogaamiyihii aragtida dheeraa ee males zinaawi oo ay ka soo wareegtay geeridiisii muddo haatan laga joogo sanad ayaa waxaa aan marnaba ayna shacabwaynaha dalka itoobiya gaar ahaana shacabka DDSI ilaawayn himilooyinkii iyo qorshayaashii uu jeexay halyaygaasi.
Tar tankan Orodka ahaa ayaa isugu jiray 2 qaybood oo u kala baxayay Qayb Orodka ah oo ay ku tartamayeen Masuuliyiinta Xukuumada DDSI iyo Qaybta 2aad oo ay Qaybaha kale ee bulshadu ku tartamayeen,iyadoona Dhanka Masuuliyiinta uu kaalinta 1aad galay madaxa Xarunta golaha dhexe ee XDSHSI mudane ahmed Maxamed shugri.
Dhanka kale tartankan orodka Saaka ka dhacay Magaalada Jigjiga ayay aad uga muuqatay Khibrad la’aan,isdhexyaac iyo Nidaam la’aan sababtay in Xili orodkii bilaabmay Dib loo joojiyo.